Nextcloud inosanganisa mabasa matsva uye inosimbisa pachayo seimwe sarudzo | Linux Vakapindwa muropa
Nextcloud inosanganisa mabasa matsva uye inosimbisa pachayo seimwe sarudzo yakakomba mubhizinesi chikamu
Nextcloud inosanganisa mabasa matsva. Akazvarwa se forogo yeOwncloud, yakavhurwa sosi faira yekugovana mhinduro, ikozvino iri pasi pezita Nextcloud Hub inova mukwikwidzi wakakomba yevashandisi vezvigadzirwa zvakadai seHofisi 365 kana GoogleDocs.
Ne Nextcloud Hub, vashandisi vanogona goverana uye shandira pamwe pamagwaro, tumira uye gamuchira maemail, gadzirisa khalendari yako, uye ita hurukuro dzevhidhiyo hapana data rinodonha.
Kunyangwe chiri chikumbiro chakagadzirirwa musika wekambani, hapana matambudziko mukuishandisa yega kana mumapoka emhuri.
Kusiyana nemhinduro senge Google Docs kana Hofisi 365, Nextcloud Hub funciona mukubata kwemushandisi. Kunyangwe kuisirwa kungangoda hunyanzvi hwepamusoro kupfuura wepakati mushandisi, akawanda asingadhuri marongero ekugamuchira vanosanganisira iyo yekumisikidza inoita kuti maitiro acho ave nyore kana uchiita shanduko kuseva kuwedzera chengetedzo.
Uyewo unogona kuiisa pakombuta yako wega. Pane zvakawanda zvekudzidzisa maitiro ekuiisa pane Raspberry Pi. PaLinux unogona kushandisa iyo mutseki mune iyo Snap package fomati.
Padivi remutengi, isu tinayo mafomu eWindows, Linux, Mac uye nharembozha.
Pane chinhu chimwe chete chaunoda kuti urambe uchifunga. Ini ndakanzwa nezve mamwe masevhisi ekugamuchira anotsamwa kana iwe ukaisa yako yese 4k bhaisikopo kuunganidzwa kumaseva avo. Ukaenda ku kuhaya pekugara kwekunze, unofanirwa kubvunza cNdeapi ehurongwa ari akanakisa pane zvaunoda.
1 Nextcloud inosanganisa mabasa matsva. Heino runyorwa
Nextcloud inosanganisa mabasa matsva. Heino runyorwa
Frank Karlitschek, anoona nezve ruoko rwekutengesa rweiyo projekiti (Nextcloud ndeye mahara asi anopa masevhisi achibatana nevamwe vanopa) akatsanangura kuti chiono chechigadzirwa ndechei:
Iwo musika wanga uchikumbira imwe nzira yemuno kune yekunze masevhisi masevhisi ayo anochengetedza dijitari kuzvitonga kwevashandisi vayo. Nextcloud Hub ndiyo yekutanga uye yakakwana-yakasangana yekudyidzana chikuva iyo inogona kuitirwa pane yemukati bhizinesi zvigadzirwa »
Mutungamiri anofunga nezve Nextcloud Hub se musika wekutanga wakabatanidzwa zvizere zvemukati kubatana chikuva, Yakagadzirira chizvarwa chitsva chevashandisi vanotarisira musoni kushandira pamwe pamhepo kugona kunze kwebhokisi.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinoratidzwa tinogona kutaura:
Microsoft Office inoenderana: Kushanda pamwe chete neOneOffice vagadziri, zvaikwanisika kuvhura, kugadzirisa, kugadzira uye kusevha magwaro mumafomu ekudyidzana eMicrosoft.
Nzvimbo dzebasa: Izvozvi zvave kugona kuisa maforodha aine zvinyorwa uye zvekuita-zvinyorwa mumamiriro ekumusoro pamusoro peji.
Kuyerera: otomatiki ekudzokorora mabasa akadai sekushandura gwaro kuita pdf.
Faira kukiya: Unogona kudzivirira kugadzirisa faira painotorwa pasi kana kurongedzwa nemumwe munhu.
Taura: Iyo yemukati mameseji mutengi ine nyowani mushandisi interface, boka rekugadzirisa manejimendi, hombe emojis, uye kuziviswa kweanounzwa mameseji.
Mail server: Iyo mail server inongoburitsa ruzivo rwekufamba kubva kunzira dzekufamba kana ichitsvaga vanogamuchira uye ichivawedzera kukerenda. Rutsigiro rwuri nani rwekushandisa kwemavara akapfuma uye masiginecha akaisirwa
Karenda: Dzokororo musangano maficha uye akavakirwa-mukati mamakamuri ekukurukura. Vashandisi vanogona ikozvino kuwedzerwa kune chat uye vhidhiyo kufona kubva kumusangano wakarongwa.
Image geolocation: Iyo nyowani yemifananidzo gallery inoita kuti zvikwanisike kupenengura nekumaka mapikicha avanofarira, inoratidza vashandisi nguva, uye inosanganisa iyo Mapplication application kuratidza kuti papi pikicha dzakatorwa pamepu yenyika.
Kune vashandisi veiyo yapfuura vhezheni yeNextcloud, lIyo nyowani yekuvandudza ichave ichiwanikwa nekukurumidza apo ivo vanogadzira vanogamuchira zvirevo yeavo vakaisa iyo vhezheni nyowani kubva ku 0. Kana yagashirwa chete, iwo mavhezheni matsva emaapplication anofanira kuiswa.
Izvo zvakakodzera kutaura nezve iyo Nextcloud inosanganisira akasiyana siyana-echitatu-bato kunyorera izvo zvinogona kuiswa kuti zviwedzere mashandiro avo. Kunyangwe iwe usingade OnlyOffice, unogona kusarudza iyo online vhezheni yeLibreOffice.
Pasina mubvunzo, zvese zvakavanzika uye zvemari zvikonzero, Nextcloud Hub iri imwe nzira yakanakisa kune mhinduro dzenhumbu. Asi, mukudzoka iwe unofanirwa kuteerera kune nyaya senge sevha uye application chengetedzo uye kumisikidza kwekuvandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nextcloud inosanganisa mabasa matsva uye inosimbisa pachayo seimwe sarudzo yakakomba mubhizinesi chikamu
10 yakavhurika sosi makambani anotungamira chikamu